ကျနော်တို့ အားလုံးကို ဦးခင်လှိုင် ပေးလိုက်တဲ့ ဘဝ သင်ခန်းစာ – Shwe Nay Chi
မင်္ဂလာပါ ပရိတ်သတ်ကြီးရေ….. မနေ့က မြန်မာဇာတ်ကား တစ်ကားကြည့်လိုက်မိတယ် ဇာတ်ကားရဲ့အမည်က မင်္ဂလာကုတင် အဓိကသရုပ်ဆောင် မင်းသား /မင်းသမီး မြင့်မြတ်-ကျော်ကျော်ဗိုလ်-ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
ဒါပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားမှာပါတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေ ကောင်းမကောင်းတော့ ကြည့်ဖူးတဲ့သူတွေ သိပါလိမ့်မယ်။ ကျုပ်ရဲ့အတွေးထဲမှာ အသိတရားတခုရလိုက်တာက ဦးခင်လှိုင် သရုပ်ဆောင်တဲ့အခန်း ဘယ်အခန်းလေးများ ဖြစ်နေမလဲသိပ်ကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလို
ယနေ့ နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်ပါ အသိ သတိ ရှိစေဖို့ ကျုပ်ရေးသားပေးလိုက်တယ်။ မင်္ဂလာကုတင် ဒီဇာတ်ကားမှာ ဦးခင်လှိုင်သရုပ်ဆောင်ပြလိုက်တာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတော့ မဟုတ်ဘူး ရိုးရှင်းတဲ့ဇာတ်သဘာဝဇာတ်ဝင်ခန်းလေးသာ ဖြစ်တယ်။
ရွာတရွာမှာ နွားနိုးကို ရေရောရောင်းတဲ့ သူတယောက်ရှိတယ်။ အဲ့ဒီနွားနို့သည်နေရာက ဦးခင်လှိုင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့တယ် ရယ်စရာကောင်းတာက ဦးခင်လှိုင် နွားနို့ကို ရေရောတဲ့ အခါ ခိုးပြီးရေ ရောခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။
ဝယ်သူအရှေ့မှာ နွားနို့ကို ရေရောပစ်တယ်။ ဒါပေမယ် ဦးခင်လှိုင် နွားနို့ကိုဝယ်တဲ့ သူတွေအားလုံးက ကျေနပ်ကြတယ်။ ဦးခင်လှိုင် ရေရောပုံကို ကြည့်နွားနို့ဝယ်သူအရှေ့ နွားနို့ပုံးချနွား နို့ကိုခွက်နဲ့ခပ် ဝယ်သူရဲ့ ခွက်ထဲကိုထည့်ပေးပြီးတာနဲ့….
ကဲအဒေါ်တို့အိမ်ကိုကောင်းကောင်းလေး သောက်စေချင်လို့ ရေမရောခင် လာပို့ပေးတာ ကျန်တဲ့အိမ်တွေတော့ သူတို့ထိုက်နဲ့သူကံပဲ ဆိုပြီးအဲ့ ဒီနွားနို့ဝယ်တဲ့ အဒေါ်ကြီးဆီက ရေတောင်းခပ်ပြီး နွားနို့ပုံးကို ရေရောလိုက်တယ်။
အိမ်ရှင်အဒေါ်ကြီးကလည်း ကြည်ကြည်ဖြူဖြူနဲ့ သူအရှေ့နွားနို့ပုံးထဲ ဦးခင်လှိုင် ရေရောနေတာကို ကျေ နပ်နေတယ်။ ဒီအဒေါ်ကြီးရဲ့ စိတ်ထဲမှာတော့ ဦးခင်လှိုင် ရောင်းလိုက်တဲ့နွားနို့က ရေ မရောရသေးဘူးလို့ အဒေါ်ကြီး ယုံကြည်နေတယ်။
သူ့ကို ဦးဆုံး လာပို့တယ် ထင်နေတဲ့အတွက် ဒီနို့ကိုနွားနို့စစ်စစ်လို့ လုံးဝယူ ဆနေတယ်။ ကိုယ်အရှေ့မှာ နွားနို့ကိုရေရောနေတာ မြင်ပါလျက်နဲ့နွားနို့အစစ် ထင်ပြီး ကျေကျေနပ်နပ် သောက်နေဦးမယ်ဆိုရင် ကိုယ်အရှေ့ရေရောပြီး နွားနို့ရောင်းနေသူကို ကျေကျေနပ်နပ်ကြီး ရေရောခွင့်ပြုနေရဦးမှာပါပဲ။
အဲ့ဒီလိုပါပဲ ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာလူကြီး လူငယ် ကလေးပါမကျန် အာဏာရူး ပုလ္လင်တက်တဲ့သူက ကိုယ်ရဲ့အရှေ့မှာ သတ်ဖျက်နေတာ မြင်ပါလျက်နဲ့….
ငါသား/ငါသမီး/ငါတူ/ငါတူမ/ငါမြေး/ငါမြစ်/မဟုတ်ဘူး ထင်နေသူတွေ ရှိနေသမျှကာ လပတ်လုံး ဦးခင်လှိုင် နွားနို့ကို ရေရောရောင်းသလိုမျိုးပဲ ကျုပ်တို့ နောက်လာမယ် အမျိုးဆက်တွေအထိ ဒီလူသတ်ကောင်တွေကို ခွင့်ပြုပေးနေရဦးမယ်ဆိုတာ အသိသတိ ပြုမိကြမှာပါ။
အခုလိုဝင်ရောက်ဖတ်ရှု့ပေးကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တစ်ယောက်ခြင်းစီတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ Credit